Nhau - Hot Bending Glass
Girazi rekushongedza igirazi chigadzirwa chinonyanya kushandiswa pakushongedza, mazhinji acho akadzika akagadziriswa, kusanganisira embossing, chando, kupenda, nezvimwe.
Kufara Girazi Rakadzikamainogadziriswa kuita nzvimbo inodzikisira nehumwe mudziyo nemidziyo, uye inokurumidza uye zvakafanana kutonhodzwa nemhepo inotonhora. Iyogirazi rakadzikama inogadzira yunifomu yekumanikidza kushushikana pamusoro, uye yemukati tensile kusagadzikana kunoumbwa, iyo inonyatso kunatsiridza girazi. Iyo girazi ine kana mana kukotama uye kukanganisa kuramba kwegirazi. Kana yatyoka, Iyo yekupwanya nzira yakafanana neiya yegirazi girazi. Iwo akanaka-angled akanaka ma particles haana kukuvadza kumuviri wemunhu.
Naizvozvo, inonziwo mhando yegirazi rekuchengetedza. Iyo yekupwanya nzira yakafanana neiyo ye girazi rakadzikama. Iyo yakanaka yekufungidzira-angled yakanaka haina kukuvadza kumuviri wemunhu nekudaro inonziwo mhando yegirazi rekuchengetedza.
Iyo ndiyo sarudzo yakasarudzika yevakagadziri vanofanirwa kusangana nemitemo yekuvaka uye kuomeswa nekusimbiswa kuitira kuchengetedzwa. Kuvimbisa mhando, izvo zvinoshandiswa muhunhu hwechigadzirwa zvinofanirwa kutemerwa neese China akatsamwa girazi mutengesi uye anodhura. Iyo inowanikwa mune ese edu akajairwa kuyangarara ukobvu uye hukuru, nekudaro iyo girazi rakadzikama mutengo unosarudzwa nehukuru hwakasiyana.
Girazi rakadzikamaimhando yegirazi rakadzivirirwa. Kubudikidza nenzira yemuviri kana yemakemikari, yunifomu yekumanikidza kushushikana kunoumbwa pamusoro pegirazi, uye kusagadzikana kunetseka kunoumbwa mukati. Iko kuvapo kwesimba simbi kushushikana iyo inogona kunyatso kuronga iyo microcrack kuparadzira pane yegirazi pamusoro, kuti iyo girazi rakadzikama ine yakakwira michini simba, yakanaka yekupisa kugadzikana uye chengetedzo kuita.
Joyshing Girazi inozivikanwa seimwe yevanogadzira girazi vagadziri uye vanopa muChina zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemasevhisi akanakisa. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira girazi rakadzikama, laminated girazi, girazi, girazi rine chando, girazi rezuva, nezvimwewo Ndokumbira uve nechokwadi chekutenga girazi remhando yepamusoro pamutengo unodakadza, taura nesu kuti uwane kwazvino kotesheni uye ruzivo rwechigadzirwa.